Natiijada Doorashada Degaanka Lughaya iyo Saylac ee Xeebaha Awdal iyo Selel oo Shacabka Degaanku Soo Dhaweeyeen | lughayanews
Natiijada Doorashada Degaanka Lughaya iyo Saylac ee Xeebaha Awdal iyo Selel oo Shacabka Degaanku Soo Dhaweeyeen
SAYLAC – Shacabka Reer Saylac iyo Lughaya ayaa si wayn usoo dhaweeyey natiijada doorashada golaha degaanka ee degmooyinka. Shacabka, aqoonyahanka, waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda Selel ayaa isku raacay in Saylac ka dhacday doorasho xor ihi “One Man One Vote” Halkaana guushu ku raacday xisbigii iyo musharixiintii ugu codka badnaa si cadaaladi ku dheehan tahay. Farxada iyo damshaadka kasoo yeedhaya shacabka ku nool Degmada Saylac ee xarunta gobolka Selel ayaa gaadhay meeshii ugu saraysay oo ilaa maanta maqribkii lagu gaadhay khayriyada magaalada Saylac oo ku caan ah taariikhda Islaamka ee wakhtigii Axmed Gurey iyo Masjidka Qiblatayn (Qudus iyo Makka). Maasjidkan oo la dhisay wakhtigii islamku u tukan jiray Baytal Maqdis intaan Rasuulku (SCW) lagu soo dejin waxyigii amarka eebe ee Mecca loogu badalay.
Degmada Saylac ayaa leh taariikh dhaxal gal ah oo shacabka Awdal iyo Selel ay ku faanaan oo ay Soomaalidu ku tilmaansato. Saylac oo ah daaqadii diinta Islamku kasoo gashay bariga Africa wakhtigii muhaajirtiintu ay soo gaadheen “Ardul Xabash” Dhabtii sida taariikhdu dhigayso wxay ahayd xarun aad u magac dheer oo ilbaxnimo dheer gaadhay. Wakhtigii gumaysigu uu soo galay Geeska Africa ayaa siyaasadii Ingiriiska iyo faransiiska ayaa isku tagay Saylac oo curyaamiyey. faransiisku wuxuu degay Jabuuti oo uu u dhisay xadiidka isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya taasina ay hoos u dhac wayn ku keentay ilbaxnimadii iyo horumarkii Saylac.
Degmada Lughaya sidoo kale shacabku si xoog leh ayey usoo dhaweeyeen natiijada dorashada waxayna tacsi tiiranyo leh u gudbiyeen marxuunkii wiilkiisu halkaas ku qudhwaayey oo ay rasaastu kaga fakatay muwaadin kasoo jeeda Lughaya oo marxuunka adeer ugu toosan kana soo jeeda Degmada Garbodadar. Waana la’isku afgartay inay khatal tahay ku timi reer Lughaya wax gacan shisheeye ah oo ku jirtay ma jirto.
Doorashada dalka ayaa guud ahaan uga qabsoontay si habsi leh oo xadaaradi ku dheehan tahay. Waxaana la rajaynayaa in doorashada baarlamankuna sidan iyo si ka fiican dalka uga qabsoonto hadii eebe idmo.
Degmada Lughaya beesha Jabuuti waxay ku lahayd 2 mudane halka ay Saylac ku lahaayeen 9 mudane oo kusoo baxay “List” ama nidaamkii codka xisbiga ee lagu soo bixi jiray maanta oo cod lagu soo baxayna isku midkii ayey haystaan. Dhinaca baarlamanka beesha Jabuuti waxay ka heleen hal kursi sharaf oo la siiyey Xildhibaan Cali aareeye. Cabashada kasoo yeedhaysa Xildhibaanka Sharafka beesha Jabuuti ugu jira Baarlamanka waxay shacabka dalku ku tilmaameen waxba kama jiraan.
« Kulanka Wasiirrada Arrimaha Dibadda Islaamka Iyo Dowlada Turkiga Oo Ka Dhacay Istanbul Oo Soomaaliya Lagu Taageerayey Amaano Kugu Raagtay Xoolahaagaa La Moodaa »
warsame, on December 4, 2012 at 7:07 am said:
dhul ninkiisii baa iskaleee. ninka dhoofku yimid bay geeridu dhubaysaa wakhitiiga dhaamyoo wa dhaqaqi doonaa
abdallah, on December 6, 2012 at 7:13 pm said:
waqtiyada socdalka ah ayamaha silsilada ah sacad anu joniyo ila samankii nabi nuux soyalkaa badh badh sadarada diib ugu noqo basuu’al dad waynahaa sojire hada tahay Saylac aya iskalee war Samaron run aan ahay, Saylacnaa ana iska leh handad ka samrii waydanaa anu madax salaxa iyo sasabada ma aqaan ee seeftaydu wa dacar sohdintaydu wa caan, Siligaa inoo dhex ah, Sory-na wa laga dhahay maxan kusameyaa saaxiibkay rumaadow?
Samatar, on December 6, 2012 at 7:17 pm said:
Lughay, ma Web dadku u dhexeeyaa misa dad gaar ah ayaa iskale .
Markaad soo qoraysaan Shabkii Saylac ayaa doorashadii soo dhaweeyey beentaa intaas le eg miyaanad ogayn in adaku ayenan qaadan karin , jaw